ပရိသတ်တွေက သူမကို လွမ်းရော လွမ်းနေကြရဲ့လားဆိုပြီး မေးခွန်းေ လး မေးခဲ့တဲ့ သံသာမိုးသိမ့် – XB Media Myanmar
သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ MRTV-4ရဲ့ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကနေ အောင်မြင်လာတဲ့ မင်းသမီးတစ် လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာဆိုရင် “ပျားရည်အိုင်၊ အချစ်ဖွဲ့ေ လညင်း…. အစရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုလည်း
မမှားလောက်ပါဘူး။ သံသာမိုးသိမ့်ကတော့ လတ်တလောမှာ ကြော်ငြာလေးတွေကို ရိုက်ကူးေ နတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အချစ်ဖွဲ့လေညင်း ဇာတ် လမ်းတွဲလေးပြီးသွားပေမယ့် ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်အောင် ချောမောလှပလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ
တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သံသာမိုးသိမ့်က“ဒီနေ့ကတော့ Bio Oil TVCလေးပါ မိန်းကေ လးေ တွအတွက် မရှိမဖြစ်ပဲနော် အော်ပြီးတော့ မိန်းကလေးအတွက်လည်း မရှိမဖြစ်ပဲ ဒါနဲ့ မိန်းကေ လးကိုလွမ်းလား”လို့ဆိုပြီး သူမရဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေး ပရိသတ်တွေကကော
သတိရလွမ်းဆွတ်နေလားလို့မေးလိုက်ရင်းနဲ့ ချောမောလှပလွန်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့လွမ်းနေကြလားလို့မေးခွန်းလေးကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်ေ နာ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း သံသာမိုးသိမ့်ရဲ့ မေးခွန်းလေးကို ဖြေပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။
သံသာမိုးသိမျ့ကတော့ MRTV-4ရဲ့ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲကနေ အောငျမွငျလာတဲ့ မငျးသမီးတဈ လကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရိုကျကူးထားတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှဟောဆိုရငျ “ပြားရညျအိုငျ၊ အခဈြဖှဲ့ေ လညငျး…. အစရှိတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျအောငျသရုပျ ဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျဆိုလညျး
မမှားလောကျပါဘူး။ သံသာမိုးသိမျ့ကတော့ လတျတလောမှာ ကွျောငွာလေးတှကေို ရိုကျ ကူးေ နတာကိုလညျး တှရေ့မှာပဲဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့သရုပျဆောငျထားတဲ့ အခဈြဖှဲ့လညေငျး ဇာတျ လမျးတှဲလေးပွီးသှားပမေယျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျမပွတျအောငျ ခြောမောလှ ပလှနျး တဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ
တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သံသာမိုးသိမျ့က“ဒီနကေ့တော့ Bio Oil TVCလေးပါ မိနျးကေ လးေ တှအတှကျ မရှိမဖွဈပဲနျော အျောပွီးတော့ မိနျးကလေးအတှကျလညျး မရှိမဖွဈပဲ ဒါနဲ့ မိနျးကေ လးကိုလှမျးလား”လို့ဆိုပွီး သူမရဲ့ ကွျောငွာရိုကျကူးရေး ပရိသတျတှကေကော
သတိရလှမျးဆှတျနလေားလို့မေးလိုကျရငျးနဲ့ ခြောမောလှပလှနျးတဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရေးသားဖျောပွထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ သံသာမိုးသိမျ့ရဲ့လှမျးနကွေလားလို့မေးခှနျးလေးကို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျေ နျာ။ပရိသတျကွီးကလညျး သံသာမိုးသိမျ့ရဲ့ မေးခှနျးလေးကို ဖွပေေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။